Wararka - Sida loo doorto nooca dab-bakhtiiye ee ugu fiican
Dab-bakhtiiyeha ugu horreeyay waxaa rukhsad ka helay farmashiistaha Ambrose Godfrey sanadkii 1723. Tan iyo markaas, noocyo badan oo dab-bakhtiiyeyaal ah ayaa la ikhtiraacay, la beddelay lana sameeyay.
Laakiin hal shay ayaa weli sidii hore ah iyadoo aan loo eegin xilliga - afar cunsur waa inay joogaan a dab inuu jiro. Walxahaas waxaa ka mid ah oksijiin, kuleyl, shidaal iyo falgal kiimikaad. Markaad ka saarto mid ka mid ah afarta cunsur ee ku jira “saddexagalka dabka, ”Dabkii markaa waa la damin karaa.
Hase yeeshe, si loogu guuleysto daminta dabka, waa inaad isticmaashaa Bakhtiiye sax ah.
Si aad si guul leh ku damiso dab, waa inaad isticmaashaa dab bakhtiiye sax ah. (Sawir / Greg Friese)
Waa maxay sababta dab-damiska, ambalaaska ay ugu baahan yihiin dab-bakhtiiyeyaal la qaadan karo
Casharrada ku jira isticmaalka dab bakhtiiye
Sida loo iibsado dab-bakhtiiyeyaasha
Noocyada ugu badan ee dab-bakhtiiyeyaasha loo isticmaalo noocyada shidaalka dabka waa:
Dab-bakhtiiye: Dab-bakhtiiyeyaasha biyuhu waxay damiyaan dabka iyagoo ka qaada waxyaabaha kuleylka ah ee saddexagalka dabka. Waxaa loo isticmaalaa dababka heerka A oo keliya.
Demiye dabka kiimikada qallalan: Dab-bakhtiiyeyaasha kiimikada ee qallalan ayaa bakhtiiya dabka iyagoo hakad galiya falcelinta kiimikada ee saddexagalka dabka. Waxay wax ku ool u yihiin dabka heerka A, B iyo C.
Dab-bakhtiiye CO2: Demiyeyaasha kaarboon laba ogsaydhku waxay ka qaadaan qaybta oksijiinta ee saddexagalka dabka. Waxay sidoo kale kuleylka ka saaraan dheecaan qabow. Waxaa loo isticmaali karaa dabka heerka B iyo C.
Iyo sababta oo ah dabka oo dhan waxaa loo shidayaa si kala duwan, waxaa jira dab-bakhtiiyeyaal kala duwan oo ku saleysan nooca dabka. Dab-bakhtiiyeyaasha qaarkood waxaa loo isticmaali karaa in ka badan hal nooc oo dab ah, halka kuwo kalena ay ka digayaan adeegsiga dab-bakhtiiyeyaal fasal gaar ah.
Waa tan burburka dab-bakhtiiyeyaasha oo loo kala saaray nooc ahaan:
Dab-bakhtiiyeyaasha loo kala saaray nooc ahaan: Maxaa dab-bakhtiiyeyaasha loo adeegsadaa:
Dab-bakhtiiye Fasalka A Dab bakhtiiyeyaashaas waxaa loo isticmaalaa dabka ku lug leh waxyaabaha gubta ee caadiga ah, sida qoryaha, xaashi, maro, qashinka iyo caagagga
Dab bakhtiiye Class B ah Dab bakhtiiyeyaashaas waxaa loo isticmaalaa dabka ku lug leh dareerayaasha ololi kara, sida dufanka, shidaalka iyo saliidda.
Dab-bakhtiiye Class C ah Dab bakhtiiyeyaashaas waxaa loo isticmaalaa dabka ku lug leh qalabka korontada, sida matoorrada, qalabka wax lagu beddelo iyo qalabka.
Dab-bakhtiiye heerka D ah Dab-bakhtiiyeyaashaas waxaa loo isticmaalaa dabka ku lug leh biraha guban kara, sida potassium, sodium, aluminium iyo magnesium.
Dab bakhtiiye Class Class Dab bakhtiiyeyaashaas waxaa loo isticmaalaa dabka ku lug leh saliidaha wax lagu kariyo iyo dufanka, sida dufanka xoolaha iyo khudradda.
Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in dab kastaa u baahan yahay bakhtiiye ka duwan oo ku saleysan duruufaha jira.
Hadana haddii aad isticmaaleyso dab-bakhtiiye, kaliya xusuusnow PASS: soo jiid bishka, ujeedo biiyaha ama tuubada salka dabka, tuuji heerka qalliinka si aad u soo saartid wakiilka bakhtiiye oo aad u xoqdo qarka ama tuubbada dhinac ilaa dhinac ilaa dabku ka baxo.